रात भिडियो च्याट र चौबीस घण्टा लाइव चैट रूले - भिडियो च्याट - जीवन डेटिङ - लाइव धाराहरु!
रात भिडियो च्याट र चौबीस घण्टा लाइव चैट रूले
आफ्नो मनपर्ने तरिकामा
जब काम थियो एउटा जिम्मेवारी दिइएको एक कथा लेख्न बारेमा रात च्याट, म निर्णय गर्न प्रयोग र बस्न च्याट भावनाहरु बीस-चार घन्टा रोकिँदै बिना"गरेको गरौं हेर्नुहोस् तपाईं कसरी गर्न सक्छन् ले यस प्रकारको संचार।" म आफैलाई भन्नुभयो छैन बिना अरुको अहित गर्ने इच्छा. सबै इच्छा, म भनिन्छ सकिँदैन सुपर मिलनसार व्यक्ति । निस्सन्देह, म मित्र, तर यो सर्कल को नयाँ मित्र म प्रयास गर्न सीमा । पनि मेरो काम छैन मान्छे संग तर संग पदहरू, र कर्तव्य मा, म पूरा कि छ केवल संग ग्राफिक सम्पादक । त्यसैले, यो आशा गर्न बारी गर्न भिडियो च्याट बीस-चार घन्टा म दुवै हुँ डराएको र उत्साहित छ । तर पत्रकार को डर छैन लागि कठिनाइहरू । म निर्णय गर्न बलियो हुन.
प्रारम्भिक शनिबार बिहान म फर्केर कम्प्युटर मा र तयार गर्न जाने । लगाएका एक सरल तर सुरुचिपूर्ण टी-शर्ट, कंघी मेरो कपाल । संग गर्न केही बाधा प्रयोग, म सैंडविच र चिया एक कप.
अगाडि । विवरण वेबसाइट मा थियो कि म चयन वेब च्याट बीस-चार घन्टा एक दिन एक रूसी अनुरूप सुपर-लोकप्रिय च्याट भावनाहरु वेबसाइट. प्रणाली चयन अनियमित वार्ताकार ध्यान केंद्रित, निवास को ठाँउ मा: पहिलो, देख मान्छे को लागि बन्द भने, तर केही कारण लागि कुनै पनि छन्, जडान संग प्रयोगकर्ता.
अनि हो, दर्ता मा वेबसाइट छ आवश्यक छैन.
साथै, बालिका र मान्छे को कुरा मा वेब च्याट मुक्त छ । त्यसैले, म फर्केर क्यामेरा मा । पहिलो मान्छे म मा देखे को अनुगमन देखि थियो मोनाको छ । उहाँले थियो, र म नम्रता सोधे आफ्नो उमेर । यो बाहिर लागे, उहाँले, उहाँले एक विद्यार्थी र अध्ययन छ आर्किटेक्चर छ । जब बोल्ने को रोम (त भनिन्छ मानिस) भ्रमित छ मलाई पनि, अधिक संक्षिप्त जवाफ, तर पछि पहिलो पाँच मिनेट संवाद को मुस्कुराइन् र अधिक सक्रिय भए मलाई सोध्न प्रश्नहरू.
पनि प्रस्ताव राखे तर म व्यस्त थियो भने, बिदा र सर्नु घण्टे च्याट.
किन जान्न चाहन्छु
मेरो दोस्रो सहकर्मी थियो एक राम्रो जवान देखि यूराल. उहाँले तुरुन्तै बनाउन थाले मलाई, र साधारण व्यवहार मा मेरो आफ्नै तरिका छ । भनेर भन्नुभयो मा बसिरहेका जीवित च्याट बीस-चार एक महिनाको लागि र उहाँले गर्न रुचि मा च्याट संग बालिका । तर धिक्कार, थाहा छैन अंग्रेजी र च्याट गर्न सक्नुहुन्छ विदेशी महिला, , ' रूसी", — उहाँले मलाई भन्नुभयो.
पनि चाहन्थे थप्न मलाई सूची सम्पर्क, तर म फेरि नम्रता अस्वीकृत । यो समय पाउन एक नयाँ मित्र छ । त्यसैले सम्म, च्याट भावनाहरु बीस-चार घण्टा थियो गर्न रोचक मलाई । असामान्य कुराकानी संग क्यामेरा संग एक आगन्तुक छ जस्तै अन्धा मिति.
र तपाईं पनि क्षमता छ के प्रत्याशा गर्न आफ्नो नाम छ, र जहाँ उहाँले आउँछ.
किनभने एउटै मुद्दामा सुरुमा कुराकानी को लगभग सधैं उत्तेजित गर्दछ मानक छ । तर एक पटक तपाईं कसरी देख्न व्यक्ति देखिन्छ, सोध्नु को आवश्यकता छैन, उहाँलाई पठाउन एक फोटो रूपमा समयमा अनलाइन पत्राचार । मान्छे को एक धेरै चिन्ता छैन को बारे मा आफ्नो उपस्थिति, किनभने जडान सामान्यतया घर देखि.
यस्तो व्यक्ति मा हुन सक्छ चाउरी टी-शर्ट, आरामदायी बस्ने कुर्सी मा वा ओछ्यानमा मा झूट छ । यो पनि सिर्जना प्रभाव को उपस्थिति भने, आमन्त्रित । घण्टा लगातार संचार, म संग भेट मान्छे. तिनीहरूमध्ये थिए, एक युक्रेनी, स्विडिश र अमेरिकी. आफ्नो उमेर मा वर्ष । निस्सन्देह, पाउन एक साधारण भाषा संग सबै काम छैन. कसैले देखि को पहिलो मिनेट कुराकानी हुनेछ सजिलो र रमाइलो छ, र केही कठिन हुन सक्छ मौन रहन वा, बुरा. तर वास्तविक जीवन मा सबै कुरा ठीक त्यही छ । हाम्रो काम छ गर्न पहिलो छनौट र चाल्नु दोस्रो । एक नम्बर पछि मेरो वेब च्याट मा थियो, म थकित महसुस र स्पष्ट भावना को "पर्याप्त।" तर प्रयोग बन्द गर्न आवश्यक छ ।. मेरो अनुभव मा, रात च्याट भावनाहरु देखि कुनै फरक छ दिन । धेरै अधिक इच्छुक छन् बस्न नेटवर्क मा त्यो रात । म भर आए एक छोइरहनु जोडी छ कि मान्छे को कुरा गर्न खोजे चुपचाप गर्न रूपमा यति, बाधा ती सुतिरहेको मा अन्य कोठा आमाबाबुले. (र शायद पत्नी । स्पष्ट, म थिएन. ) जब चालक अन्तमा मेरो समय थियो, अधिक म अधिक -जस्तै । म संग कुरा मान्छे बीस-चार घन्टा एक दिन मा एक फ्री च्याट भावनाहरु संग क्यामेरा छ । हो बारे सबै छ । कसैले मलाई भन्नुभयो आफैलाई बारेमा र आफ्नो काम, कसैले सम्झना मित्र र रोचक अनुभव छ । कसैले मा अधिक रुचि, मलाई र यस्तो थियो र, म स्वीकार, पनि झूठ गर्न. एक पटक म संग सामना गर्न अनुहार एक कम्पनी को पांच, यो केटाहरू थिए बियर पिउने र निर्णय मा कुरा गर्न च्याट । चाँडै नै चलान गर्न, दूर तिनीहरूलाई देखि. अर्को समय म थियो एक राम्रो संग कुरा वर्षीया मानिस देखि जर्मनी, साझा जो आफ्नो शोक: एक्लै बस्ने, छोराछोरी, अर्को शहर मा, नरमाइलो लाग्यो । मात्र एक विश्वासी कुकुर हो इन्टरनेट संचार यो हसाउने. बस बीस चार घन्टा समावेशन थियो उत्तरदाताओं प्लस नै कम्पनी को पांच छ । खैर, हो । तिनीहरूलाई इच्छा व्यक्त गर्न जारी सामाजिक नेटवर्क मा संचार वा, तपाईं आफैलाई गर्व प्रयोग देखाए कि एक पाउन योग्य वार्ताकार मा च्याट भावनाहरु सम्भव छ । आफ्नो बारी, प्रिय बालिका र केटाहरू । टरस रुचि गर्न मा च्याट भिडियो च्याट बिना समय सीमित छ, र च्याट को एक छ. डेटिङ मा फ्री भिडियो च्याट छ एक ठूलो मौका विकास गर्न आफ्नो बुद्धि र समझ सिक्न, बुझ्न र महसुस मान्छे । यो कला महारत गर्न सकिन्छ मार्फत दैनिक प्रशिक्षण र विश्लेषण मानव व्यवहार ।.
डेटिङ साइट सिएटल संयुक्त राज्य अमेरिका
म भेट्न चाहन्छु एक महिला भिडियो च्याट अनलाइन भिडियो च्याट डेटिङ डेटिङ च्याट भिडियो च्याट वर्ष पूरा गर्न एक केटी भिडियो च्याट बिना दर्ता र मुक्त एक्लो महिला पूरा गर्न चाहन्छ भिडियो च्याट महिलाहरु डेटिङ बालिका